रेसान ननवोन कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता
रेसिसन गैर बुनेको कपडा निर्माता र चीन मा आपूर्तिकर्ता।
Pp Spunbond गैर बुना कपडा
Ss गैर बुना कपडा
मेडिकल गैर बुना कपडा
कृषि गैर बुना कपडा
फ्रुस्ट संरक्षण ऊन
गैर बुने झार नियन्त्रण कपडा
गैर बुनेको टेबलक्लोथ
एसएमएस गैर बुना कपडा
Meltblown गैर बुना कपडा
सुई पंच गैर बुना कपडा
स्पनलेस गैर बुना कपडा
रेनीनले पीपी spenunbond निर्माण गरेको छ गैर बुने कपडा, एसएस गैर बुने कपडा, मेडिकल गैर बुनेज कपडा, गैर बुनेल टेबलक्लोथ र कृषि गैर बुनेज कपडा।
रेसिसन गैर बुनेको कपडा
रेसनन गैर बुने, विकास र उत्पादनमा प्रतिबद्ध छ। यसको मुख्य उत्पादनहरू पीपी गैर बुनेड कपडा, एसएस गैर बुने कपडा, एसएमएस गैर बुनेको कपडा, मेल्टब्यान्ड नविक, सुल प्युच ब्लेड र क्रून्स
निलो एसएस नलो बुनेको कपडा मास्क को लागी 2555 मिमी
योनिलो एसएस गैर बुनेको कपडा मास्कको पहिलो तहको लागि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यो 2uner रिक चौड़ाई चौडाई 1 155 मिली हो। एसएस गैर बुनेड कपडा नरम, सास फेर्न योग्य र पानी डिस्लेल हो। र यो निलो एसएस अन बुनेको बुनेको कपडाले रेस्सन द्वारा उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।
चीनमा गैर बुनेक्लिकेलोथ (रोल) को व्यावसायिक निर्माता)
गैर बुनेको टेबलक्लोथ पनि, जसलाई पोलप्रोप्रोनलिन सामग्रीबाट बनाइएको एउटा कपडा हो। इको-मैत्री, सजिलो फाइदाहरू, र रिसाइक्लेबल, रेस्टुरेन्टन्ट, होटेलहरू, र पार्टीहरू जस्ता विशेष घटनाहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो मुख्य उत्पादनहरू गैर उत्पादनहरू गैरकानहरू हुन् रोल, टिन्टी तालिका धावक, प्रि-कट कार्यसूल रोल र गैर बुनेब प्लेसम्याट।
नरम / हाइड्रोफिल गैर बुनेको कपडा
एसएस गैर बुन्ने कपडा डबल बीम प्रविधिबाट बनेको हुन्छ। के तपाइँ जलविद्युरी फेब्रिक फेब्रिक परिभाषा हट गर्नुहुन्छ? यस ss गैर बुनेको कपडाको केहि खुल्ला सुविधाहरू सास फेर्न सकीन योग्य, नरम, हाइड्रोफिली र हानिरहित हुन्छन्। यस प्रकारका हाइड्रोफिली कपडा मास्कको भित्री तह सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रेसिसन एक पेशेवर जलविद्युरी गैर बुरोग्ली गैर बुनेको कपडा उत्पादकहरू हो, धेरै वर्ष धनी अनुभवको साथ।
SS गैर बुनेको डिस्पोजेबल अस्पताल बेड पाना
एसएस गैर-बुनेड कपडा डिस्पोजेबल अस्पताल बेड पाना उत्पादनको लागि राम्रो सामग्री, नर्सिंग बेडहरू, अस्पताल ओछ्यानमा प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। यी ओछ्यानकाटहरू डिस्पोजेसन हुन्, डिस्पोजेबल ओछ्यान पानाहरू द्वारा उत्पादित, यसको अर्थ प्रत्येक क्लिनिकको लागि एक स्वच्छ तर लागत प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्दछ।
रेसिसन गैर बुनेको कम्पनी एक अग्रणी गैर बुनेको कपडा निर्माता उत्पादितकर्ता र चीनमा आपूर्तिकर्ता हो जुन गैर-बुनेको उत्पादन र आर&D. उत्तम गुण व्यवस्थापन प्रणाली र धनी उत्पादन अनुभवले स्थिर र राम्रो उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न सक्दछ
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुभवको 1 15 बर्षको साथ बिक्री टोलीले अंग्रेजी, स्पेनिश, इटालियन र अरबीमा पेशेवर सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छ। हाम्रो उत्पादनहरू संसारभरि 400 भन्दा बढी देशहरूमा बेचिन्छ।
रेसानसँग 10 उन्नत गैर-बुनेको कपडा लाइनहरू, जसले प्रति महिना विभिन्न र colors ्गहरू उत्पादन गर्न सक्दछ, अधिकतम रोल चौडाइ .2m को अधिकतम रोल चौडाइ। उत्पाद प्रकारहरू pP गैर-बुनेको कपडाहरू, एसएमएस, पग्लिएर-उडाएको कपडाहरू, र सुईले गैर-बुनेको कपडा, र स्पनले बजाएको कपडालाई टाढो बनाउँदछ।
गोदाममा दीर्घकालीन पर्याप्त कच्चा भौतिक सूचीमा उत्पादनको मूल्यको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ।
Foshan रेसिनन गैर बुनेको शंकु, लिमिटेड। एक proth shishan उच्च-टेक क्षेत्र को शहर मा अवस्थित एक pro-El संयुक्त उद्यम, गाविसमै, होन्डा, CMOO, CMO र अन्य उद्यमहरु को साथ, एक जटिल कभरिंग संग। करीव 800,000 वर्ग मीटरको क्षेत्र र 40000 भन्दा बढी व्यक्ति रोजगार। कम्पनी स्पानबंड गैर-बुनेको कपडा र गैर-बुनेको कपडा उत्पादहरूको उत्पादनमा विशेषज्ञहरू, 300 भन्दा बढी देशहरूमा बेचिएको छ।
Foshan रेसिनन गैर बुनेको शंकु, लिमिटेड। अव्यवस्थित निर्मित निर्माता भनेको गैर-बुनेको कपडामा अनुभवको साथ। यो गैर-बुनेको कपडा अनुसन्धान, विकास, र उत्पादनको लागि प्रतिबद्ध छ र 10 उन्नत गैर-बुनेको कपडा लाइनहरू, एसएस गैर बुनेड, एसएमएसएल र स्पनेलले 10GSM बाट 10GSM 1 150GSS सम्म 1 1500 ग्राम भित्र तौल .20g सम्म, वार्षिक उत्पादन रकमको वार्षिक उत्पादन रकमको साथ। कम्पनी धेरै विभिन्न र colors ्ग र आकारका आकारहरू उत्पादन गर्न सक्षम छ, विभिन्न विभिन्न प्रयोगहरूको लागि उपयुक्त।